I-2,4-Dinitrochlorobenzene (DNCB) yinkomfa ye-organic kunye nefomula (O2N) 2C6H3Cl. Sisisiqina esimthubi esinyibilikayo kwizinyibilikisi eziphilayo. Liphakathi elibalulekileyo kwimveliso yezemveliso yezinye iikhompawundi.
Imbonakalo yikristale emthubi, umgubo, unyibilika kwi-ethanol, inyibilika emanzini. Izinto ii-Indices zeNkangeleko yokuManzi okuManzi Umgubo weCrystal Purity% -98.0 -80.0 Indawo yokunyibilika ℃ -138.0 -138.0 Insolubles kwi-HCl% -0.1 -0.0 Usetyenziso lokwenza idayi yokuvelisa kunye namayeza aphakathi. Isetyenziswa ikakhulu kwi-asidi ye-asidi RH, i-asidi eluhlaza ye-asidi, i-Black BL, i-BRL, i-BGL. Ukupakisha iingxowa zeFayibha ngaphakathi ngaphakathi ngaphakathi kunye neplastiki, i-25kg inetha nganye. Ukupakishwa okwenziweyo kuyaxoxwa.